सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाईमा आवेदन दिने मिति थप | Artha News Nepal
Home	लगानि	सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाईमा आवेदन दिने मिति थप
काठमाडौं । चैत १ गतेदेखि विक्री खुला भएको सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाईमा आवेदन दिने समयावधि थपिएको छ । उक्त फण्डको इकाईमा आवेदन दिने छिटो अवधि चैत ४ गतेसम्म भएपनि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेकाले ढिलो अवधि (चैत १६ गते)सम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ ।
उक्त कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने यो फण्ड सञ्चालनका लागि रू. १ खर्ब बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो । कुल इकाईमध्ये कोष प्रबर्द्धक सनराइज बैंकलाई १५ प्रतिशतका दरले १ करोड ५० लाख इकाई सुरक्षित राखी बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो ।
प्रतिइकाई मूल्य रू. १० रहेको यो इकाईमा आवेदन दिँदा न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १ करोड कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
इकाई विक्री प्रबन्धकमा पनि सनराइज क्यापिटल नै रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै इकाई खरीदका लागि आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै, मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
आवेदनसनराइजसनराइज ब्लूचिप फण्ड